पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुबिच ग्याङ फाइट ! - Punhill Online
होमपेज / कास्की
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुबिच ग्याङ फाइट !
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २१:३७ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि)
सामान्यत हामी विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि जाने गछौं । माध्यमिक शिक्षा सकेपछि सुरु हुने विश्वविद्यालयमा कतिपय राजनैतिक करिअरका लागि मात्रै पनि जाने गर्छन् ।
यस्तै, राजनैतिक करिअर बनाउँने थलोका रुपमा चिनिएको विश्वविद्यालय हो पृथ्वीनारायण क्याम्पस । पढ्ने÷पढाउँने पीएन कहिले आन्दोलन त कहिले झगडा काण्डले तातिईं रहन्छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको नाममा राजनैतिक पार्टी निकट संगठनमा लागेका दुई विद्यार्थी समुहबिच बिहीबार सामुहिक हानाहान भएको छ । नेकपा निकट अनेरास्ववियु र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निकट नेवि संघका सदस्यबिच क्याम्पस परिसरमै हानाहान चलेको हो ।
हानाहानबाट अनेरास्ववियुका विराट दवाडी र विशाल पन्त घम्भिर घाईते भएका हुन् । नेवि संघका सतिश बास्तोलाको नेतृत्वको टोलीले रड प्रहार गर्दा उनीहरु गम्भिर घाईते भएको अनेरास्ववियु कास्कीका अध्यक्ष विवेक देवकोटाले जानकारी दिए । ‘दोहोरो हानाहान हो,’ उनले भने, ‘तर, ज्यान मार्ने उद्देश्यले हतियार प्रहार भयो ।’ अहिले उनीहरुको मनिपाल अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ । घाईते दुइलाई आइसियूमा राखिएको छ ।
यसअघि, अनेरास्ववियुका विराट र विशालले नेविसंघका सतिशमाथि पनि हमला गरेका थिए । संगठनमा आबद्ध भए पनि व्यक्तिगत रिसिबी साँध्न सांगठनिक हमला गरिएको अनेरास्ववियुले बताएको छ ।
नेवि संघका निर्वतमान केन्द्रिय सदस्य भानु ढकालले सांगठनिक रुपमा नभई व्यक्तिगत रिसिबीको कारण कुटाकुट भएको प्रष्ट्याए । उनका अनुसार नेवि संघका केही सदस्य पनि कुटाकुटबाट घाईते छन् । ‘संगठनले त यस्ता झगडामा नलाग्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने । वार्ताको माध्यमबाट कुरा मिलाउँने पक्षमा आफूहरु रहेको उनले सुनाए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार झगडा भएको जानकारी पाए पनि अहिलेसम्म कुनै जाहेरी भने परेको छैन । ‘झगडा भएको भन्ने त हामीले थाहा पाएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, कुन संगठन निकट हो भनेर हामीलाई जानकारी आएको छैन । लिखित÷मौखिक कुनै पनि किसिमको जाहेरी हामीलाई परेको छैन ।’
पीएनमा यसअघि पनि यस्ता घटना घट्दै आई रहेको छ ।